दयाको भर कबड्डीमा हो ? « Mazzako Online
दयाको भर कबड्डीमा हो ?
अभिनेता दयाहाङ राई युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छन् । चलचित्र लुट बाट चिनिएका दयाका चलचित्र रिलिजको लागि तातीमा छन् । दयाको क्रेज र साख जोगाएको र बढाएको थियो, रामबाबु गुरूङको चलचित्र कब्बडीले । यसको सिक्वेल कब्बडी कब्बडीमा पनि दयालाई नै देखियो र अहिले यसको तेस्रो सिक्वेल कब्बडी कब्बडी कब्बडीमा पनि उनी नै प्रमुख भूमिकामा छ ।
चलचित्र अहिले छायांकनको क्रममा छ । त्सैले दया त्यसमै ब्यस्त छन् । तर उनी अहिले फिल्म प्रमोशनमा देखिन पर्ने हो । दयाका दयारानी , आप्पा लगायतका चलचित्र रिलिजको पर्खाईमा छन् । फिल्म निर्माण टिम प्रमोशनमा लागि रहदा दया उपस्थित भएका छैनन् ।
उनी कब्बडी कब्बडी कब्बडीको सेडिउलमा नै ब्यस्त छन् । अझ भनौ उनको फोकस र ईन्ट्रेष्ट कब्बडी ३ मा नै देखिएको छ । यसमा उनी क्याप्टेन स्टारर नायिका उपसना सिंह ठकुरी सँग काम गर्दै छन् र यी अलवा चलचित्रमा कर्मा, रिश्मा गुरूङ लगायतका कलाकार पनि छन् । कब्बडी ३ कब्बडीको फेमले पनि प्रतिक्षित छ र यसलाई लिएर निर्माण पक्ष पनि निकै उत्साहित छन् । त्यसैले होला दया पनि कब्बडी ३ नै राम्रो बनाउन लागि पर्या ।
दयाका पच्छिल्ला चलचित्रको व्यपार हेर्दा धेरै कमजोर देखिन्छ । त्यसैले होला उनी कब्बडी ३ लाई लिएर उत्साहित भएका । के उनलाई अब कब्बडी ३ कै भर पर्नु पर्ने हो ?